Nampiasain’ny jiolahy : fantatra ny laharan’ny basy sy ny bala | NewsMada
Fantatra avokoa amin’izao fotoana izao ny laharan’ireo Kalachnikov miisa efatra, izay tsy nisy nofafana na nokikisana na iray aza, araka ny vaovao voaray avy amin’ny zandarimaria. Ohatra amin’izany ny laharana Culasse TP 9715 corps 1964 TP 97n couvercle JGP 7716. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny momba ireo basy sy bala 119 ary ilay grenady iray tratra tao amin’ilay trano nitazonana an’i Arnaud. Fantatra avokoa ny laharan’ny bala na ny “lotissement” sy ny laharan’ilay grenady iray. Ambenana mafy ilay trano nahitana ireo basy ireo amin’izao fotoana izao, miandry ny fotoana anaovana ny fanadihadiana eny an-toerana.
Araka ny fanazavana azo, efa fantapantatra ny momba ny toerana nivoahan’ireo fitaovam-piadiana ireo. Tsy mbola nisy aloha ny famoahana anarana, fa eo am-panaovana ny fanadihadiana rehetra ny avy amin’ny “cellule d’enquête”. Mandeha ny feo fa an’ny miaramila ireo basy ireo saingy mbola eo am-panamarinana izany ny mpanao fanadihadiana. Ny lehiben’ny mpampanoa lalàna ao Toamasina rahateo efa nanamafy fa tsy maintsy fantatra izay niavian’ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo, fa tsy ataon’ny sasany fialokalofana ny hoe fitaovam-piadiana very tamin’ny taona 2002 ireo.
Efa mandeha ihany koa ny feo ny amin’ny fisiana mpitandro filaminana mpamatsy fitaovam-piadiana olon-dratsy. Tsy zava-baovao ity tranga farany satria na eto an-drenivohitra aza efa nahenoana toy izany. Ny zandary teny amin’ny Toby Ratsimandrava efa vaky vava ny amin’ny fisian’ny mpiray tsikombakomba ka mampanano sarotra ny fanadihadiana indrindra amin’ny resaka kidnapping tahaka izao.
Nozahana i Arnaud
Andanin’izany, efa natao fizahana teny amin’ny CHU Toamasina i Arnaud, ary efa any amin’ny ray aman-dreniny. Araka ny vaovao voaray, salama tsara izy saingy taitaitra ihany indraindray. Nilaza ny fianakaviana fa ny fanontaniana apetraka aminy no mandreraka azy indraindray.
Misy ny fikarakarana fotoam-pivavahana ho an’i Annie sy Arnaud any Toamasina, izay hataon’ny tanora any an-toerana. Mandeha ihany koa ny karazana fitrotroana am-bavaka sy fisaorana tamin’izao nahafahan’i Arnaud soa aman-tsara izao. Ankilan’izany, mandeha ny fanadihadiana momba ny fitaovam-piadiana sy ny olona mety mbola ho tafiditra amin’ity raharaha ity.